Hanqinni kitaaba barataa magaalaa Finfinnee maatii fi manneen barnootaa waldhabsiisaa jira - BBC News Afaan Oromoo
Hanqinni kitaaba barnootaa waggaa waggaan nu mudachaa jiru hojii baruu fi barsiisuuf gufuu cimaa ta'eera jedhan dura butoonni manneen barnootaa fi maatiiwwan baratottaa manneen barnootaa dhuunfaa Magaalaa Finfinnee BBC'n haasofsiise.
Amma kitaaboota gosawwan barnootaa garaagaraa kan kutaalee 1-8 gatii kitaabota irratti barreefameen dachaa hedduun gabaarratti gurguramu.
Fakkeenyaaf kitaabni saayinsii hawaasaa kutaa 3ffaa gatii isaa qarshii 33 ta'e qarshii 160 hanga 200'tti gurgurama.
Magaalaa Finfinnee naannoo Lagahaaritti daldalaan kitaabaa, hanqinni kitaabolee barnootaa magaalattii keessatti hammaataa ta'uusaa nutti himee, kitaabni Afaan Amaaraa kutaa sadaffaa qarshii 350'tti gurguramaa akka jiru dubbata.
Maatiin osoo kitaaba barnootaa bitaa jiranuu haasofsiisne Obbo Daawit Salamoon, kitaabolee kutaa sadaffaa gosoota afur bituuf karoorfatan keessaa tokko qofa bitatanii galuu dubbatan.
Mootummaan kitaaba raabseera jedhee miidiyaalee irratti dubbata, manni barumsaa garuu barattootaaf kitaaba hin dhiyeessine.
Obbo Daawit Salamoon, Maatii barattootaa
"Mootummaan kitaaba raabseera jedhee miidiyaalee irratti dubbata, manneen barumsaa garuu barattootaaf kitaaba hin dhiyeessine. Ijoolleen koo kutaa 6 fi 9 baratan mana barumsaarraa kitaaba hin arganne. Gatii ol'aanaan gabaarraa bitaa jira," jedhan.
Gatiin kitaabilee olaanaa ta'uusaa baasii hin eegamneef saaxilamu isaanii kan himan Obbo Daawwit Salamoon rakkoo kanaaf mootummaan akka gaafatamuu qabu himan.
Biiroon Barnootaa Magaalaa Finfinnee garuu manneen barnoota dhuunfaa fedhii isaanii yeroodhaan waan nu hin beeksisneef, rakkoon nu bira osoo hin taane manneen barnootaa bira jira jedha.
"Hanqinaafi gabaa dhoksaa"
Kitaabileen manneen barnoota dhuunfaa magaala Finfinnee "nu hanqataniiru" jedhanii nutti himan kan biiroon barnootaa magaala Finfinnee maxxansiise gabaawwan kitaabaa magaalattii keessatti gatii mi'aawaan gurguramu.
Manneen barnootaa kitaabilee argachuu dhabanis daldaltoonni BBC'n haasofsiise garuu daldaltoota irraa akka argatan kan dubbatan.
Daldaltoonnis kitaabilee kunneen baay'inaan bituun manneen kuusaa keessa kaa'uun baasaa akka gurguran himu.
Gama biraatiin, namni biiroo barnoota magaala Finfinneetti sadarkaa hooggansarra jiraniifi "dhimmicharatti yaada kennuuf odeefannoo waqtawaa hin qabu" jedhan tokko hanqinni kitaabilee mudachuu kan danda'e ''dhaabbatni kitaaba nuuf maxxansu kitaabilee dogongora qaban maxxansuu isaatini" jedhan.
Haa ta'u malee, dhaabbatichi kitaabilee dogongora qaban yoo maxxanse kitaabni gabaa irratti gatii ol'aanaan gurguramu eessaa dhufe? Innihoo dogongora qabaachuu fi dhiisuu isaa eenyutu to'achaa jira?
Deebii gaaffiwwan kunneenii kan gaafanne daayrektarri dhimmoota kominikeeshinii biiroo barnoota magaalaa Finfinnee Obbo Abbabaa Charinnat "dhimmicha baruuf qorachaa jirra" jedhan.
Manneen barnootaa dhuunfaa magaalaa Finfinnee gosaa fi baay'ina kitaaba barbaadan erga beeksisanii booda ji'a Adoolessaa keessa biiroo barnootarraa bitatu.
Jiini Adoolessaa immoo yeroo manneen barnootaa dhuunfaa baay'een galmee barattootaa itti adeemsisani dha.
Kanaafuu, yeroo kanatti kitaaba lakkoofsa barattootaan wal gitu bituun ulfaataa akka itti ta'e dura bu'aan mana barumsaa dhuunfaa BBC'n haasofsiise tokko dubbatu.
''Qubeennaa Tafarraa yiwadmaal" aarsaa Afaan Oromoof kaffalame
Yeroo ammaattis hanqinni kitaabilee kan akka saayinsii, barnoota lammummaa fi amala gaarii akkasumas afaan Amaaraa kutaa 1-8 cimaa ta'uusaa fi rakkoon kun maatiin barattootaa manneen barnootaa irratti shakkii akka qabaatan gochaa jiraachusaa kan himan.
Maatiiwwan barattootaa haasofsiisnes mootummaan yoo kitaaba gahaa dhiyeessuu hin dandeenye, manneen barnootaa kitaaba ofiif akka maxxansan eeyyamuu akka qabu yaada kennu.
Aangoon kitaaba barnootaa maxxansuu kan kooti kan jedhu biiroon barnootaa magaalaa Finfinnee garuu rakkoon kun dhimma yeroo dhiyootti hiikamudha jedha.
Daldaltootni kitaabilee barnootaa naannoo Lagahaaaritti argaman garuu kitaabota kanneen haala si'ataa ta'een gurguraa jiru.
Kan yeroof of harkaa hin qabnes guyyoota lama yookiin sadii keessatti akka dhiyeessan maatii barattootaaf waadaa seenuun deebisu.